UYENZA KANJANI IMIXI YESTEREO WINDOWS 10? - ITHAMBILE
Uyenza kanjani iMixi yestereo Windows 10?
IiWindows OS zihlaziywa rhoqo ngeempawu ezintsha ngelixa ezinye ezikhoyo ezingasetyenziswa rhoqo ngabasebenzisi zisuswe ngokupheleleyo okanye zifihlwe nzulu ngaphakathi kwe-OS. Enye yezinto ezinjalo nguMxube weStereo. Sisixhobo esivakalayo esingasetyenziselwa ukurekhoda isandi esidlalwa ngoku kwizithethi zekhompyuter. Inqaku, nangona liluncedo, alifumaneki kuzo zonke Windows 10 iinkqubo kule mihla. Abanye abasebenzisi abanethamsanqa banokuqhubeka besebenzisa esi sixhobo sishicilelweyo, ngelixa abanye kuya kufuneka bakhuphele usetyenziso lomntu wesithathu ngokukodwa kule njongo.
Sichaze iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokwenza iStereo Mix kwi Windows 10 kweli nqaku kunye neengcebiso ezithile zokufumana ingxaki ukuba kukho nayiphi na imiba. Kwakhona, iindlela ezizezinye zokurekhoda iziphumo zekhompyuter zekhompyuter ukuba umxholo womxube weStereo awufumaneki.
Uyisebenzisa kanjani iMixi yestereo kunye neengcebiso malunga neengxaki
Indlela ye-1: Qinisekisa ukuba iMakrofoni iyafumaneka kuFikelelo
Indlela yesi-2: Ukuhlaziya okanye ukwehlisa abaqhubi beAudio
Ezinye iindlela kuMxube weStereo
Abasebenzisi abaninzi baxela ukuba umxube we-Stereo wanyamalala ngequbuliso kwikhompyuter yabo emva kokuhlaziya kuhlobo oluthile lweWindows. Abambalwa babephantsi kwengcinga ephosakeleyo yokuba iMicrosoft yathatha inqaku kubo, nangona umxube weStereo ungazange ususwe ngokupheleleyo Windows 10 kodwa kukhubazeke ngokungagqibekanga. Isenokuba sesinye sezicelo zomntu wesithathu ozifakileyo ezikhubaza ngokuzenzekelayo isixhobo soMxube weStereo. Nangona kunjalo, landela la manyathelo angezantsi ukwenza uMxube weStereo.
1. Khangela indawo I icon yesithethi kwi-Taskbar yakho (ukuba awuyiboni i-icon yesithethi, cofa kuqala kwindawo ejonge phezulu 'bonisa ii icon ezifihliweyo'), cofa ekunene kuyo, kwaye ukhethe Izixhobo zokurekhoda . Ukuba ukhetho lwezixhobo zokuRekhoda lungekho, cofa ku Izandi endaweni yoko.
2. Hambisa kwi Ukurekhoda ithebhu yefestile yesandi elandelayo. Apha, cofa ekunene kuMxube weStiriyo kwaye ukhethe Yenza isebenze .
3. Ukuba isixhobo sokurekhoda uMxube weStereo asidweliswanga (siyaboniswa), cofa ekunene kwisithuba esingenanto kwaye phawula Bonisa izixhobo ezikhubazekileyo kunye nezixhobo eziBonakalisiweyo ukhetho.
4. Cofa apha Faka isicelo ukugcina uhlengahlengiso olutsha kwaye uvale iwindow ngokunqakraza Kulungile .
windows qala ukhuphelo lokusombulula ingxaki kwimenyu
Unako kwakhona ukwenza iStereo Mix kwisicelo seSeto seWindows:
1. Sebenzisa indibaniselwano yehotkey Isitshixo seWindows + mna ukwazisa Useto kwaye ucofe ku Inkqubo .
2. Tshintshela kwi Isandi iphepha lesetingi ukusuka kwiphaneli yasekhohlo kwaye ucofe kuyo Lawula izixhobo zesandi ngasekunene.
3.Phantsi kwelebheli yezixhobo zokufaka, uya kubona Umxube weStereo njengoKhubazekileyo. Cofa kwi Yenza isebenze iqhosha.
Yiloo nto, ngoku ungasebenzisa inqaku ukurekhoda iziphumo zomsindo wekhompyuter yakho.
Funda kwakhona: Akukho Sandi ngaphakathi Windows 10 PC [SOLVED]
Sebenzisa umxholo wokudibanisa i-Stereo kulula njengokuyenza. Qalisa isicelo sakho sokurekhoda, khetha uMxube weStereo njengesixhobo sokufaka endaweni yeMakrofoni yakho, kwaye ucofe iqhosha lokurekhoda. Ukuba awukwazi ukukhetha uMxube weStereo njengesixhobo sokurekhoda kwisicelo, qala ukhuphe iMakrofoni yakho emva koko wenze iStereo Xuba isixhobo esingagqibekanga kwikhompyuter yakho ngokulandela amanyathelo angezantsi-
1. Vula ifayile ye Isandi window kwakhona kwaye usiya kwi Ukurekhoda tab (Jonga inyathelo 1 lendlela edlulileyo.)
2. Okokuqala, khetha iMakrofoni njengesixhobo esingagqibekanga , ke ngoku cofa ekunene kuMxube weStereo kwaye ukhethe Seta njengesixhobo esiNgagqibekanga kwimenyu yokulandela elandelayo.
Oku kuyakwenza ngempumelelo uMxube weStereo Windows 10. Kwimeko apho ungakwazi ukujonga uMxube weStereo njengesixhobo kwisicelo sakho sokurekhoda okanye inqaku alibonakali lisebenza njengepapashiweyo, zama ezi ndlela zingezantsi zokusombulula.
Esinye sezizathu zokuba ungasilela ukwenza i-Stereo Mix kukuba izicelo azinakho ukufikelela kwiMakrofoni. Abasebenzisi bahlala bekhubaza usetyenziso lweqela lesithathu ekufikeleleni kwimakrofoni yenkxalabo yabucala kwaye isisombululo kukuvumela nje zonke (okanye ezikhethiweyo) usetyenziso ukusebenzisa iMakrofoni kwiiSetingi zeWindows.
1. Sebenzisa indibaniselwano yehotkey Isitshixo seWindows + mna ukwazisa IWindows Useto emva koko ucofe ku Ukuba bucala useto.
2. Skrolela ezantsi kwimenyu yokuhla usenyuka kwaye ucofe ku Imakrofoni ngaphantsi Iimvume zokusebenza.
3. Kwiphaneli esekunene, jonga ukuba isixhobo sivunyelwe na ukufikelela kwiMakrofoni . Ukuba akunjalo, cofa kwi Guqula iqhosha kunye nokutshintsha oku kulandelayo.
Funda kwakhona: Unokwenza ntoni xa iLaptop yakho ngesiquphe ingenasandi?
Kuba iStereo Mix luphawu oluchaziweyo lomqhubi, ikhompyuter yakho kufuneka ibe nezixhobo ezifanelekileyo zokufaka izixhobo zokufaka. Kungaba lula njengokuhlaziya kuhlobo lwamva nje lomqhubi okanye ukubuyela kuhlobo lwangaphambili oluxhasa umxube weStereo. Landela esi sikhokelo singezantsi sokuhlaziya abaqhubi beaudiyo. Ukuba uhlaziyo alusombululi umba, yenza ukhangelo lukaGoogle kwikhadi lakho lesandi kwaye ujonge ukuba loluphi uhlobo lomqhubi oluxhasa umxube weStereo.
1. Cinezela Isitshixo seWindows + R ukumilisela Qhuba ibhokisi yomyalelo, chwetheza yitshise.msc , kwaye ucofe ku Kulungile ukuvula usetyenziso lweMphathi weSixhobo.
2. Yandisa Isandi, ividiyo kunye nabalawuli bomdlalo ngokunqakraza ku utolo oluncinci ngasekhohlo.
3. Ngoku, cofa ekunene kwikhadi lakho lesandi kwaye ukhethe Hlaziya umqhubi kwimenyu elandelayo.
4. Kwiskrini esilandelayo, khetha Khangela ngokuzenzekelayo abaqhubi .
Kukho inani lezicelo zomntu wesithathu ezikhoyo kwiwebhu ebanzi kwihlabathi liphela enokusetyenziselwa ukurekhoda iziphumo zekhompyuter zomsindo. Uphicotho-zincwadi yenye yezona rekhodi zaziwayo zeWindows ezinokukhutshelwa okungaphezulu kwe-100M. Iinkqubo zale mihla ezisweleyo umxube weStereo ziqulathe i-WASAPI ( Windows Audio Session API ) endaweni yoko ithatha iaudiyo yedijithali kwaye ngenxa yoko, isuse isidingo sokuguqula idatha ibe yi-analog ukuze idlalwe kwakhona (Ngokwamagama abekiweyo, ifayile yeaudiyo erekhodiweyo iya kuba semgangathweni ongcono). Landa nje i-Audacity, khetha i-WASAPI njengomphathi weaudiyo, kwaye usete ii-headphone okanye izithethi njengesixhobo esibuyayo. Cofa kwiRekhodi iqhosha ukuqala.
Zimbalwa ezinye iindlela ezilungileyo zomxube weStereo IlizwiMeeter kwaye Uphicotho lweAdobe . Enye indlela elula kakhulu yokurekhoda imveliso yecompyuter ekhompyutheni kukusebenzisa ikhebula le-aux (intambo ene-3.5 mm jack kuzo zombini iziphelo.) Fakela isiphelo esinye kwizibuko leMicrophone (imveliso) kunye nenye kwizibuko le-mic (igalelo). Ngoku ungasebenzisa nasiphi na isicelo sokurekhoda esisiseko ukurekhoda umsindo.
Uyilungisa njani okanye uyiLungisa i-Hard Drive usebenzisa iCMD?
Lungisa isandi seKhompyuter sisezantsi kakhulu Windows 10
Uyijonga njani iMbali eqhotyoshwayo kwiWindows 10
Indawo yokulungisa ayinakufikelelwa, i-IP ye-IP ayifumaneki
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sasiluncedo kwaye wakwazi vumela isixhobo soMxube weStereo Windows 10 kwaye urekhode iziphumo zekhompyuter yakho zomsindo usebenzisa inqaku. Ngalo naluphi na uncedo malunga nesi sihloko, nxibelelana nathi kwizimvo ezingezantsi.
windows hlaziya ukusetyenziswa kwediski ezili-100
dhcp ayisebenzi windows 10
Umgaqo-nkqubo we-3.5 impazamo 0x800f081f
Unako ukukhuphela i-mms Android
windows 10 yokuhlaziya umda ayiyi kuvulwa
indlela yokuseta i-ftp server yewindows 10